Dowladda Soomaaliya oo ku baaqday joojinta colaada Dhuusamareeb & Guriceel – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Soomaaliya oo ku baaqday joojinta colaada Dhuusamareeb & Guriceel
13th December 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Siihayaha Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta ku baaqay in si sharuud la’aan ah lagu joojiyo dagaallo saaka ka dhacay degmada Dhuusamareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Wasiir Goodax oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in uu aad uga xumaaday marka uu maqlay dagaallo xalay iyo saakay siyaabo kala duwan uga dhacay magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Sii Hayaha wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa odoyaasha dhaqanka ka codsaday inay gacan ka geystaan dajinta xiisadaha colaadeed ee ka soo cusboonaaday deegaanno ka tirsan gobolkaasi.
Ciidamo kala taageersan dowladda Soomaaliya iyo Ahlusuna ayaa shalay iyo maanta ku dagaallamay Dhuusamareeb iyo Guriceel, waxaana ciidamada dowladdu la wareegeen Dhuusamareeb, halka Ahlsuna la wateegtay Guriceel.
Khabiirka Xuquuqda Aadana ee QM u qaabilsan Soomaaliya oo hadlay